Book गर्ने तरिका
प्रेक्षालय (हल) तथा अभ्यास कक्ष आरक्षण (Booking) गर्ने तरिका ः
१,	प्रेक्षालय आरक्षणका लागि संस्थागत रुपमा भए सो संस्थाको आधिकारिक पत्रमा संस्थाको छाप सहितको निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । ब्यक्तिगत रुपमा भए आवेदनका साथ सो ब्यक्तिको नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि अनिबार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
२,	हल आरक्षण गर्नका लागि स्वयं व्यक्ति सांस्कृतिक संस्थानमा उपस्थित भइ हल आरक्षण गराउनु पर्नेछ । फोनबाट हल आरक्षण गर्न सकिने छैन । हल आरक्षण गरिएको दुइ दिन भित्र धरौटी रकम तथा कार्यक्रम हुनु पन्ध्र दिन अगाडी हलको भाडा अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्नेछ । अन्यथा हल आरक्षण भएको मानिने छैन ।
३,	हल आरक्षणको लागि तोकिएको धरौटी रकम राष्ट्रि«य वाणिज्य बैंकको खाता नम्बर १३६०००२२६२१ मा र हल भाडाको रकम नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको खाता नम्बर ००४०१०१००१०३७३ मा जम्मा गरी भौचर सांस्कृतिक संस्थानको लेखा शाखामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
४, प्रेक्षालय ३ महिना अगाडीदेखि बुकिङ्घ गर्न सकिनेछ ।
५,	एक पटकमा लगातार बढीमा १५ दिनसम्मका लागि हल आरक्षण गर्न सक्नेछन सो भन्दा बढी दिनको लागि चाहिएमा पुनः दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
६,	आरक्षण गरेको दिन कार्यक्रम रद्द गर्नु परेमा ३० दिन अगाडी नै सांस्कृतिक संस्थानको हल शाखामा लिखित जानकारी गराएमा पुरै धरौटी फिर्ता गरिनेछ । तर सो भन्दा कम समयमा जानकारी गराएमा पुरै धरौटी जफत गरिनेछ ।
७,	एथेष्ट कारणहरु देखाइ सेवाग्राहीले आरक्षण गरेको कार्यक्रमको मिति सार्न चाहेमा सो को सूचना ३० तीस दिन भन्दा अगाडी नै निवेदन सहित जानकारी गराउनु पर्नेछ । यसरी आएको निवेदन उपर छलफल गरी पछाडीको मितिमा सार्न सकिनेछ । तर यसरी मिति सार्ने कार्य एक पटक भन्दा बढी गर्न पाइने छैन । अन्यथा धरौटी जफत हुनेछ ।
ग्राहकहरुले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु ः–
१) संस्थानको हाता भित्र कुनै प्रकारको क्याटरिङ्ग खाना, चिया आदी बनाउन पाइने छैन । तर हल शाखाको स्वीकृति लिइ बाहिरबाट प्याकिङ्ग गरेर ल्याएको खाना भने खुवाउन सकिनेछ । खानेकुरा हल भन्दा बाहिर लबीमा मात्र खुवाउन पाइनेछ । त्यस्तो बेला भएको फोहोर मैला सम्बन्धित पक्षले नै सरसफाई गर्नु पर्नेछ । यदि सरसफाइ नगरिएको पाईएमा धरौटीबाट रु. ३,०००।– कट्टा गरिनेछ । हल भित्र कुनै पनि प्रकारको खानेकुरा लान सख्त मनाही छ ।
२) आफुले निवेदनमा उल्लेख गरेको भन्दा बढी समय प्रयोग गर्न पाइने छैन । तर पूर्वाभ्यास तथा रङ्गमञ्च सज्जाको लागि निवेदकले माग गरेको समय भन्दा एक घण्टा अगाडी मात्र हल खोलिनेछ । यदि आफ्नो समय भन्दा अगाडी पछाडी बढी समय प्रयोग गरेमा वा प्रयोग गर्न चाहेमा प्रति घण्टा रु. ५,०००।– (पाँच हजार) का दरले अतिरिक्त भाडा बुझाउनु पर्नेछ ।
३) राष्ट्रिय नाचघरको कम्पाउण्ड, प्रेक्षालय भित्र कुनै पनि प्रकारको प्रज्वलनशील पदार्थ, हातहतियार वा कुनै पनि गैरकानुनी सामग्री ल्याउन पाइने छैन । अन्यथा प्रचलित कानुन अनुसार कार्बाही गरिनेछ ।
५, प्रेक्षालय प्रयोग गर्नु भन्दा अगाडी भाडा भुक्तानी गरेको रसिद, गेटपास वा स्वीकृति पत्र हल शाखा सम्बद्ध अधिकृतलाई देखाउनु पर्नेछ, अन्यथा प्रेक्षालय खोलिने छैन ।
६, प्रेक्षालय भित्र मादक पदार्थ, लागु पदार्थ, धुम्रपान आदिको प्रयोग गर्न सख्त बन्देज छ । यदि सो कार्य गरेको पाइएमा तुरुन्तै कार्यक्रम रद्द गराइनेछ । सो को हर्जना आयोजक स्वयंले ब्यहोर्नु पर्नेछ । सांस्कृतिक संस्थानको कम्पाउण्ड लगायत मूल प्रवेशद्वार, भवनको हल, स्टेज र लवीका भित्ताहरुमा पोष्टर टाँस्ने र दाग लगाउने, पोष्टर टाँस्नका लागि किला काँटी ठोक्ने जस्ता अशोभनीय कुनै पनि कार्य गर्न पाइने छ्रैन ।
७, संस्थान भवनमा रहेका सामानहरु प्रयोग गर्नु अगाडी संस्थान र आयोजक दुबै पक्षले निरीक्षण गरी लिनु पर्नेछ र स्टेज हल र अन्य ठाउंमा जडान भएका भौतिक सामानहरु कार्यक्रम सकिए पछि पुनः निरीक्षण गरी बुझाउनु पर्नेछ ।
८, कार्यक्रमको बेला संस्थानको हल भित्रको कुनै पनि भौतिक सामानमा हानी नोक्सानी भएमा धरौटी रकमबाट कट्टा गरिनेछ । यदि हर्जनाको लागत धरौटी रकमबाट पनि अपुग भएमा आयोजकको बाँकी सर सामान उठाउनु अघि आयोजकले नोक्सानीको लागत अनुसारको रकम बुझाउनु पर्नेछ । अन्यथा प्रचलित कानुन अनुसार कार्बाही गरिनेछ ।
९) टिकट बिक्री गरी हुने कार्यक्रमको लागि कार्यक्रमकै दिन मात्र संस्थानको मूल गेटमा टिकट बिक्री गर्न पाइनेछ । टिकट बिक्रीका लागि संस्थानको हाता भित्र माइक, क्यासेट ठूलो आवाजमा बजाउन पाइने छैन । तर अरुलाई बाधा नहुने गरी सानो हाते माइक भने प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
१०) आयोजकले कार्यक्रमको बेलामा स्टेजमा प्रयोग गरिएका ब्यानर, पोष्टर, स्टेज सेट आदि सामानहरु कार्यक्रम सकिएको भोलीपल्ट लगिसक्नु पर्नेछ । यदि नलगिकन सो सामानहरु हराएमा वा भाँच्चिए नासिएमा संस्थान जवाफदेही हुने छैन ।
११) प्रेक्षालय प्रयोग गर्दा आफ्नो सामानको सुरक्षा आयोजक आपैmले गर्नु पर्नेछ । कार्यक्रमको बेला यदि आयोजकको कुनै सरसामान हराएमा संस्थान जवाफदेही हुने छैन ।
१२) कुनै महत्वपूर्ण सरसामान भएमा हल शाखामा बुझाई सो सामानको भरपाई लिइ कार्यक्रम सकिएपछि उक्त भरपाई अनिवार्य रुपमा हल शाखामा बुझाइ आफ्नो सामान लान सकिनेछ ।
१३, आयोजक र संस्थान बीच कुनै समस्या आएमा आपसी समझदारीद्वारा समस्याको समाधान गरिनेछ ।
१४. संस्थानको प्रेक्षालयमा गरिने कार्यक्रममा राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र पञ्चशिलको शिद्धान्त विपरीत र सामाजिक सद्भाव तथा शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याउने प्रकारका कुनै पनि प्रस्तुतीहरु गर्न पाईने छैन । यदि यस्तो प्रकृतिका कार्यक्रम भए संस्थानले तत्काल रोक लगाउन सक्नेछ ।
संस्थानले सेवाग्राहीहरुलाई उपलब्ध गराउने सुबिधाहरु
१) सांस्कृतिक संस्थानका हलहरु (मेघा तथा मिनी) र अभ्यास कक्ष आरक्षण गर्ने सेवाग्राहीहरुले संस्थानसंग भएको ध्वनी उपकरणहरु (कयगलम कथकतझ), प्रकाश उपकरणहरु (ष्निजत कथकतझ) साथै सो उपकरणहरु सञ्चालन गर्ने प्राविधिकहरु समेत उपलब्ध गराउनेछ । यसका लागि कुनै अतिरिक्त भाडा लाग्ने छैन । तर संस्थानको ध्वनी तथा प्रकाश प्रणालीमा कुनै प्राविधिक कारणबस अवरूद्घ हुन गएमा सो को ब्यवस्था आयोजक आपंैmले गर्नु पर्नेछ ।
२) संस्थानमा भएको ध्वनी तथा प्रकाश उपकरणहरु अपुग जस्तो लागेमा आयोजकले ध्वनी तथा प्रकाश उपकरणहरु बाहिरबाट आपैm ल्याई प्रयोग गर्न सक्नेछन । तर सो को लागि हल शाखाबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ । बाहिरबाट ध्वनी तथा प्रकाशको सामान के कति ल्याइन्छ त्यसको विवरण तयार गरी सामान ल्याउंदा र लांदा हलको आधिकारिक व्यक्तिसंग सामान रुजु गराउनु पर्नेछ ।
३, रङ्घमञ्च सज्जा (कतबनभ मभअयचबतष्यल) को लागि समेत संस्थानले जनशक्ति उपलब्त्र गराउनेछ ।
४, रङ्घमञ्च ( कतबनभ ) मा चाहिने सामानहरु शोफासेट, कायक्रम उद्घाटनका लागि पानस वत्ती, टी–टेबुल, टेबुल पोश, पूmलदानी आदि संस्थानले उपलब्ध गराउनेछ ।
५, विशिष्ट तथा अति विशिष्ट अतिथिहरुका लागि विशिष्ट कक्ष (ख्क्ष्ए च्ययm) उपलब्ध गराईने छ ।
६, लोड सेडिङ्घको बेलामा संस्थानले जेनेरेटर उपलब्ध गराउनेछ । तर जेनेरेटरमा लाग्ने डिजेलको रकम संस्थान र आयोजकले आधा आधा ब्यहोर्नु पर्नेछ ।
७, प्रेक्षालय भाडामा लिने व्यक्ति वा समूहले (सिफ्ट वा पुरा दिन जसरी भाडामा लिएता पनि) दुइ दिनको लागि लगातार भाडामा लिएमा ५ प्रतिशत, तीन देखि पाँच दिनको लागि १० प्रतिशत, ६ देखि १० दिन सम्म भाडामा लिएमा १५ प्रतिशत र १० दिनदेखि माथी जति दिनसम्म भएता पनि लगातार प्रेक्षालय भाडामा लिएको खण्डमा २० प्रतिशत भाडामा छुट दिइनेछ ।
सेवाग्राहीहरुलाई विशेष जानकारी
१) सेवाग्राहीहरुले संस्थानको हलमा कार्यक्रम गरेको समयमा कार्यक्रम अवधिभर हल शाखाका कर्मचारीहरु संस्थानको कुनैपनि ठाउँमा आवत जावत गर्न सक्नेछन् । आयोजकले कुनै रोकावट गर्न पाउने छैन । तर आयोजकलाई शंका लागेमा उक्त कर्मचारीको परिचय–पत्र हेर्न सक्नेछन ।
२) सेवाग्राहीले हल आरक्षण गरेको दिनमा आकस्मिक राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय तथा सांस्कृतिक संस्थानकै विशेष कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएमा स्वीकृत कार्यक्रमलाई सार्न सक्ने अधिकार सांस्कृतिक संस्थानलाई रहनेछ ।
© Sanskritik Sansthan